रूसी pelmeni, युक्रेनी पकौडी, ravioli, इटालियन ... वहाँ एक पकवान, भित्र कीमा बनाएको मासु संग आटा एक झोला छ जो भान्सा मा? दक्षिण काकेशस देशहरूमा यो पकवान "khinkali" भनिन्छ। यो भाँडा दोश्रो देखि मात्र होइन नाम मा भिन्न छन् भनेर स्पष्ट छ। तिनीहरूलाई प्रत्येक यसको आफ्नै क्षेत्रीय विशेषताहरु छ। यहाँ र khinkali मा तिनीहरू पनि छैनन्। यो सुविधा परीक्षण को थैली भित्र अझै पनि राखिएको छ कि हुनुपर्छ र शोरबा छ। एक मासु सानो टुक्रा मा पार कट चक्कु र जडीबुटी संग मिश्रित (परम्परागत नुस्खा मा पाठो छ)।
कला sculpt khinkali - धेरै Folds सिर्जना गर्न यो कौशल। म एक साँच्चै सानो झोला, एक झोला (मालपुवा) प्राप्त गर्नुपर्छ। एक मुद्दा संग गाँसिएको भने नेत्रहीन प्रामाणिक khinkali देखिन्छ। यो विशिष्टता र विशेष आवश्यकताहरु परीक्षण को लागि दिइएको। आखिर, यो धेरै लचिलो र एकै समयमा बलियो हुनुपर्छ, त्यसैले शोरबा समय अगाडि लीक छैन। यस लेखमा हामी khinkali लागि आटा कसरी तयार गर्न छलफल हुनेछ। मोडलिङ प्रार्य गठन ravioli - एक कला हो, र हामी यो मास्टर गर्न प्रयास गर्नेछ।
क्लासिक र नवाचारै अनुमति
यो पकवान को तयारी को लागि पहिले नियम कडा थियो। भरने लागि पहाड बाख्राको वा घरेलू भेडाको मासु प्रयोग गर्नुहोस्। भराई एक चुपी मार। मात्र नुन, मरिच, जंगली सौंफ र धनिया त्यहाँ थपिएको थियो। बस पीठो, पानी र नुन: आटा khinkali पनि सामाग्री को धेरै आवश्यकता थिएन। कहिलेकाहीं उहाँले अन्डा थपियो। तर परीक्षण ब्याच धेरै समय-खपत भएको छ। तर प्रयास बन्द दिन्छिन्। आटा खाना पकाउने समयमा नरम र लचकदार, राम्रो-कायम जकडन बाहिर आए। आयाम क्षेत्रीय विशेषताहरु आधारमा वैविध्यपूर्ण khinkali। कतै तिनीहरूले एक पूर्ण प्लेट आयोजित "मालपुवा" एक ओखर को आकार, र कहिले काँही थिए। तर रडने यसलाई धेरै Folds एक झोला एक फाराम, सबै khinkali। के आधुनिक पकाउने, इच्छित स्वाद, संरक्षित अनुमति प्रार्य गठन भोजन? पहिलो, तपाईं महंगा मटन बीफ वा पोर्क प्रतिस्थापन गर्न सक्छ। कीमा मासु Mince दिनुभयो। तर khinkali तपाईं सूप एक झोला परम्परागत नुस्खा अनुसार पकाएको गर्नुपर्छ प्राप्त गर्न चाहनुहुन्छ भने आटा।
एक कचौरा Sift मा पीठो तीन कप स्लाइड गर्नुहोस्। नुन को केही pinches संग Spiked। हामी औँला recess को सुझाव मा के र यो ज्वालामुखीको मुख पानी एक गिलास खन्याउन। यो बरफ हुनुपर्छ - यो आवश्यकता छ। एक काँटा संग हलचल। जनसंचार थप वा कम आटा सदृश सुरु गर्दा, हामी यो पिठो र लामो mesim संग छर्कियो तालिका मा बदलाव। त्यो एक लचिलो प्राप्त र औंलाहरु लीन बन्द गर्नुपर्छ। तपाईंले यो प्राप्त गरेको छ जब, आटा khinkali कपडा बन्द र तीस मिनेट छोड्नुहोस्। जबकि एक भर्नको आनन्द। कीमा बनाएको मासु 500 ग्राम दुई कीमा बनाएको प्याज थप्न र बरफ पानी वा शोरबा को बेकर खन्याउन। भरने तरल अवशोषित। यो नम र अलिकति viscous, तर बाक्लो बाहिर आउनेछ।
अर्को आटा को नुस्खा khinkali लागि
पीठो (आधा रकम जो को माथि वर्णन विधि निर्दिष्ट छ) चाल्नु स्लाइड, को नुन संग मिश्रण। शोरबा एक गिलास पोख्नुहोस्। छुट्टै कचौरा मा, काँटा अन्डा हल्लाइन्छ र पनि "ज्वालामुखीको मुख" थप्न। Obmyat, मा पीठो संग छर्कियो, तालिका पास। आटा हात धेरै पहिले छडी हुनेछ। तसर्थ, पाम पनि कहिले काँही पीठो मा डूबा गर्नुपर्छ। पहिलो, सबैभन्दा लामो पछि, आधा एक घण्टा आराम गर्न आटा सानना दिनुपर्छ। यो समयमा, तपाईं भराई तयार गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि तपाईं khinkali आटा obmyat गर्न पीठो को बाँकी आधा थप्न र अर्को दस मिनेट वा एक घण्टा को चौथाई संग मुछ्नु आवश्यक छ। मोडेलिंग बैग टाढा दायाँ गर्न आवश्यक सुरु गर्न।
नुस्खा № 3
केही परिवार आटा तेल थपिएका छन्। त्यसैले यसलाई अझ लचिलो बाहिर जान्छ। र अन्डा को शोरबा मिडवे khinkali पकाएको गर्दा पोखाउनुहोस् छैन भनेर आटा, दृढ छ बनाउँछ। हामी अघिल्लो नुस्खा जस्तै सानना थाल्छन्। एक कचौरा र पीठो को आधा कप मा चाल्नु। यो आधा आवश्यक दर छ। नुन को चिया चम्चा पोख्नुहोस्। हामी मिश्रण र एक ज्वालामुखीको मुख एउटा ज्वालामुखी गठन। यो तेल दुई वा तीन सूप चम्मच खन्याउन। पनि हामी एक अन्डा ड्राइव प्रयास गर्दै हुनुहुन्छ। बिस्तारै एक हात vymeshivayut र दोस्रो सुरु चिसो पानी खन्याउन। भिन्न थोडा गर्न सक्नुहुन्छ। नुन अग्रिम पानी मा भंग र यो शांत राखे। एक नगण्य फरक - तर यो छ। जब एक homogeneous र नरम ठूलो, हामी एक तौलिया संग कवर र आधा एक घण्टा आराम गर्नु छोड्न हुनेछ। त्यसपछि, khinkali №2सल्लाह आटा नुस्खा बाँकी पीठो थप्दा र रूपमा दस मिनेट मुछ्नु। तर, अघिल्लो विधिमा विपरीत मा, हामी मोडेलिंग गर्न अगाडि बढ्न छैन। फेरि आधा एक घण्टा रोटी तौलिया संग कवर। यो समय पछि, फेरि आटा punched। यो अझै पनि आफ्नो हात गर्न sticks भने, पीठो मा फेंक।
वास्तविक Housewives घर khinkali गर्दा, अलग प्रत्येक झोला लागि आटा रोल। यो दुई तरिकामा गर्न सकिन्छ। पहिलो ठूलो नट आटा को आकार को Bun टुक्रा otschipyvanii गर्न बस हो। यो अक्सर variegated khinkali गर्न जान्छ। एक दोस्रो विधिमा Resort गर्न सक्नुहुन्छ: ससेज आटा को सम्पूर्ण आकार, एक सेन्टिमिटरले बाक्लो आधा को स्लाइस यसलाई काटे। खैर, सजिलो तरिका हामी सामान्यतया पकौडी वा पकौडी sculpt के यो छ। एक पातलो पत्र संग आटा बाहिर रोल र एउटा गोलाकार फारम lozenges प्रयोग कटौती। मात्र फरक प्रतिमान कुनै ग्लास वा ग्लास र तश्तरी छ भन्ने छ। (जस्तै सीडी-रोम रूपमा) व्यास 10-12 सेन्टिमिटर - - र पातलो, दुई मिलिमिटरमा भन्दा कुनै केक ठूलो हुनुपर्छ।
pouches को गठन
Canon पाहुनाको सत्कार गर्ने स्त्री प्रत्येक khinkali छैन कम 20 भन्दा Folds थियो आवश्यकता छ। केही कुशल कार्यकर्ता 36 आफ्नो नम्बर अप वृद्धि सक्छ! khinkali sculpt कसरी सही गर्न? चरण नुस्खा द्वारा चरण पहिलो tortillas चमचा कीमा को बीचमा बाहिर राख्नु गर्न सल्लाह दिएको छ। यसबाहेक, दुई औंला दुई विपरीत टिप सर्कल लिन र तिनीहरूलाई जडान गर्नुहोस्। khinkali सानो झिकेर आटा गर्न रचनाहरू दिनुहोस्। अब हामी कागज को पाना बाट जोडेको बाजा एक बच्चाको रूपमा, सम्झना। यहाँ नै सिद्धान्त हो। Lepim एक अर्को एउटा सर्कल मा केक सार्दा, को पुच्छर मा Folds। यो कौशल आवश्यक छ। सायद, पहिलो दस तपाईं khinkali गडबड, तर समय, आउन सक्ने क्षमता। केही Cooks अर्को तरिका खाली गठन गर्ने प्रयास गर्नुहोस्। बस उनि सँगै केक को किनाराको जडान र यसलाई वरिपरि क्यान्डी wrapper जस्तै अप पेंच गर्न भनेर झोला मोड। यो विधि सजिलो छ, तर त्यहाँ एउटा कुरा छ। पानी थैली उम्लिरहेको एक हत्येदार बरतन मा पनि स्क्रूड छ, छाडा चाँडै आउन सक्नुहुन्छ।
तयारी khinkali केही विशेष कुनै फरक छ। तिनीहरूले नियमित पकौडी जस्तै तरिकामा पकाएको छन्। मात्र कुरा एक पटक नुनीन पानी उम्लिरहेको उत्पादन को सबै फेंक छैन। प्रत्येक अन्य संग सम्पर्क बाट, तिनीहरूले सँगै आटा छडी र गर्न सक्छन् - टियर। को skimmer तिनीहरूलाई द्वारा एक कम। को बैग फ्लोट भएपछि, तिनीहरूले बारेमा छ मिनेट फोडा गर्न आवश्यक छ। तिनीहरूलाई ठूलो platter मा राखे, छिडकना Coarsely जमीन मरिच। अलग, तपाईं tkemali, satsebeli वा cornel सस पेस गर्न सक्नुहुन्छ। र एक बोतल Khvanchkara चोट छैन।
khinkali कसरी खान
यो पकवान मात्र हात लाग्छ। झोला बाट बिभाजनमा सूप संग प्वाल पार्ने काम भएको प्लेट मा गिरा, र khinkali को तयारी - एकदम समय-खपत प्रक्रिया जस्तै barbarity अनुमति। painstakingly को पाहुनाको सत्कार गर्ने स्त्री sculpted कि धेरै Folds पछि, आटा आंसू गर्दैन एक ग्यारेन्टी छ। त्यसैले khinkali खान्छन्। चटनी (कुनै छ भने) र nadkusyvayut मा "गधा" मा डूबा भएको पुच्छर, लिनुहोस्। त्यसपछि स्वादिष्ट, सूप sizzling तपाईँलाई मुखमा हुन्छ। खैर, त्यसपछि बाँकी खान्छन्। पुच्छर भएको प्लेट को किनारा मा राख्न अनुमति दिनुभयो।
आक्षेप देखि Cutlets: सरल व्यञ्जनहरु
ककटेल कसरी तयार "रूसी-जापानी युद्ध"?
विश्व स्वास्थ्य दिवस: एक महान घण्टा। विशेषताहरू र सिफारिशहरू
4G संग किबोर्ड संग ASUS 10 इन्च ट्याब्लेटको: समीक्षा
Hyperuricemia - यो के हो? प्रकार र उपचार
सर्वश्रेष्ठ गर्मी मिठाई - आइसक्रिम एक ककटेल